CRF စနစ်စုဆောင်းမှုသည်မလိုအပ်သောအစာစားခြင်း၏အမှောင်ဘက်ခြမ်းကို (၂၀၀၉) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
compulsive စား CRF System ကိုထမ်းခေါ်ယူမှုဖျန်ဖြေအမှောင်ဘေးထွက် (2009)
မှတ်ချက်များ - CRF သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုနှင့် adrenal cortex ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသည့် neurotransmitter / hormone ဖြစ်သည်။ စွဲသုတေသနပြုခြင်းက၎င်းသည်စွဲလမ်းမှု၊ စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆုတ်ခွာမှုလက္ခဏာများကိုရရှိရန်အဓိကကစားသမားဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကအစားအစာစွဲခြင်းနှင့်မဖြစ်မနေစားခြင်းတွင် CRF ရဲ့အခန်းကဏ္explကိုလေ့လာခဲ့သည်။ Guss ဘာလဲ ၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်အတူတူဖြစ်သော၊ တိရိစ္ဆာန်များသည်အဝလွန်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ၊ porn အပါအ ၀ င်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုနှင့်တူညီသည်။
လေ့လာမှုအပြည့်အစုံ: CRF စနစ်စုဆောင်းမှုသည်မစားမစားစားရခြင်း၏အမှောင်ဘက်တွင်ဖျန်ဖြေပေးသည်
proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2009 နိုဝင်ဘာ 24; 106 (47): 20016-20020
2009 နိုဝင်ဘာ9အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1073 / pnas.0908789106
Pietro ဝါဂွမ်း,a,b,c,d,1,2 Valentina Sabino,a,b,c,d,1 Marisa ရောဘတ်,a,c,d မိခါလသည် Bajo,e Lara Pockros,a ဂျနီဖာခ Frihauf,a,c,d,f အီဗာအမ် Fekete,a,c,d Lucas Steardo,g Kenner C. ဆန်,h Dimitri အီး Grigoriadis,i ဘရူနို Conti,d,e ဂျော့ခ်ျအက်ဖ် Koob,a,c နှင့် အဲရစ် P. Zorrillaa,c,d,2
ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းချုပ် Dieting compulsive စားမြှင့်တင်ရန်နိုငျသောအရေးပါတယ်လို့အစားအသောက်ထဲကနေဆင်းရဲချို့တဲ့မှုသံသရာပါဝငျသညျ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု CRF (အသစ်တဖန် access ကိုများနှင့်တစ်ဦးထိခိုက်စေဆုတ်ခွာကဲ့သို့သောပြည်နယ်အပေါ်သို့အရေးပါတယ်လို့အစားအစာ၏အရေးပါတယ်လို့အစားအစာပြပွဲကျော်မှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုကနေဆုတ်ခွာကြွက် corticotropin-releasing အချက်-1 ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကွောငျးဖျောပွသ1hypophagia နည်းအရေးပါတယ်လို့စားနပ်ရိက္ခာရရှိရန်စိတ်ခွန်အားနိုးလိုငွေပြမှုနှင့် anxiogenic ကဲ့သို့သောအပြုအမူအပါအဝင်) အဲဒီ receptor ရန်-Reversible လုပ်အပြုအမူတွေ။ ဆုတ်ခွာတိုးလာ CRF စကားရပ်နှင့် CRF ဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်1 အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် electrophysiological တုန့်ပြန်။ ကျနော်တို့ဆန့်ကျင်ဆုလာဘ် extrahypothalamic CRF-CRF ၏စုဆောင်းမှုအဆိုပြု1 အရေးပါတယ်လို့အစားအစာစားသုံးမှုတားဆီးသောအခါနှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများကနေ abstinence မှအလားတူအရေးပါတယ်လို့စာကနေဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းစနစ်များ, အရေးပါတယ်လို့အစားအစာ, ကျန်းမာသန်စွမ်းအခြားနည်းလမ်းများအောက်တွင်နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်၏ compulsive ရွေးချယ်ရေးမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်။
keywords: အစာစားခြင်းမမှန်, အဝလွန်ခြင်း, အာခေါင်, အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှီခို, ဆုတ်ခွာ
အဝလွန်ခြင်း၏ပုံစံများနှင့်မမှန်မစား, မူးယစ်ဆေးစွဲဆင်တူ, abstinence ၏ကာလကိုပြောင်းနှင့်အတူနာတာရှည် relapsing အခြေအနေများအဖြစ် conceptualized နိုင်ပါတယ် (ဆိုလိုသည်မှာ "တားမြစ်ထားတဲ့" အရေးပါတယ်လို့အစားအစာများကိုရှောင်ရှားရန် dieting) နှင့် relapse high- ၏ (ဆိုလိုသည်မှာ compulsive မကြာခဏမထိန်းချုပ်, စား အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကြားမှဆက်လက်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာများ) (1) ။ အရေးပါတယ်လို့အစားအစာများများ၏အပြုသဘောဆောင်အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုကောင်းကောင်းသိနေကြသော်လည်း (2, 3), လျော့နည်းအာရုံစူးစိုက်မှု (မိမိတို့၏အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများခံရပြီ4-6), တစ်ဦးဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များမှသက်သာရာရစေရန်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာဥပမာစားသုံးမှု) ၏ဖယ်ရှားရေးကနေထုတ်လုပ်တာအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအမည်ရတိုးမြှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးတိုးချဲ့အသုံးပြုမှုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသံသရာတဖြည်းဖြည်းမြင့်မားများအတွက်လိုအပ်ချက်နှင့် / သို့မဟုတ်၏ချုပ်ရာအပေါ်သို့ပေးထားသောစိတ်ခံစားမှု set ကိုအမှတ်အဖြစ်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့မူးယစ်ဆေးပိုပုံမှန်ပမာဏအတိုင်းလေ့လာတွေ့ရှိ "ကိုထိခိုက်မှီခို," ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ် မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု (7, 8) ။ ထိုကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်စေဆုတ်ခွာ (အသီးသီးအသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆက်လက်နှင့်ကိစ္စတွေပြန်၏အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများမှတဆင့် relapse လှုံ့ဆျောပေးစေခြင်းငှါ7, 8).
Extrahypothalamic corticotropin-releasing အချက် (CRF) ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များကိုနှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုတိုးပွားလာမဟုတ်ဘဲအပြုသဘောဆောင်တဲ့, အားဖြည့်ယန္တရားများထက်အဲဒီအနုတ်လက္ခဏာအားဖြင့်လှုံ့ဆော်ဖြစ်သည့်ကာလအတွင်းမှီခိုဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေအကူးအပြောင်းအတွက် putatively ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။ CRF (အရက်, နီကိုတင်း, ကင်း, opiates, အမ်ဖီတမင်းနှင့် tetrahydrocannabinol အပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုအဓိကမူးယစ်ဆေးများအတွက်ဆုတ်ခွာ syndrome အတွက် motivationally သက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍ7, 8) ။ တစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်အလွန်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, တိုးချဲ့သုံးစွဲနိုင်၏ထပ်ခါတလဲလဲသံသရာမူးယစ်ဆေးမှီခိုမော်ဒယ်များတွင်တွေ့မြင်သူတို့အားအလားတူ CRF system ကို neuroadaptations သွေးဆောင်ဖို့တွေးဆခဲ့ကြ (4, 5, 9).
အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, တိုးချဲ့ access ကိုတဖြည်းဖြည်း (အသစ်တဖန် access ကိုအပေါ်သို့အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမရရှိနိုင်သည့်အခါလျော့နည်းနှစ်သက်သောအစားအစာ၏ undereating ရန်နှင့်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာကျော်မှဦးဆောင်10-12) ။ ကြောင်း CRF အဆိုပါယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့1 စနစ်များသည်ဤနို့တိုက်ကျွေးမှု adapter, အထီး Wistar ကြွက် (ဖျန်ဖြေn = 20) အပတ်တိုင်းနေ့စဉ်တစ်ဦး Chow အစားအသောက်များတွင်ကြော်ငြာ libitum (Chow / Chow) ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်5နေ့ရက်ကာလအဘို့အလွန်အရေးပါတယ်လို့, sugary အစားအသောက်များတွင်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်2နေ့ရက်ကာလအဘို့ Chow ကြော်ငြာ libitum (ကို C အဆင့်) (P ကိုအဆင့်) (Chow / အာခေါင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည် ) (ကြည့်ရှု သင်္ဘောသဖန်း။ S1 အစားအသောက်များတွင်အချိန်ဇယားနှင့် သင်္ဘောသဖန်း။ S2 အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အပေါ်အစားအသောက်များတွင်အချိန်ဇယား၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ) သည်။ အစားအသောက်များတွင်စက်ဘီးစီးခြင်း၏7ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်ကြွက် non-peptide CRF လက်ခံရရှိ1 လက်တင်-စတုရန်းပုံစံဒီဇိုင်းအတွက်အဲဒီ receptor ရန် R121919 (0, 5, 10 နှင့် 20 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, SC) (13) ။ ကုသအရေးပါတယ်လို့အစားအသောက်များတွင် Chow သို့မဟုတ် Chow မှအရေးပါတယ်လို့အစားအစာကနေ switches များမတိုင်မီ 1 ဇပေးထားခဲ့ကြသည်။ R121919 ထိုး-ရသည်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာစားသုံးမှုလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့် Chow / အာခေါင်ကြွက် (အစားအသောက်အဆင့်အစားအသောက်ဇယား×မူးယစ်ဆေးဆေးသောက်ရန်×အတွက် Chow အစားအစာစားသုံးမှုတိုးပွားလာ: F3,54 = 7.25, P <0.001), chow ထိန်းချုပ်မှု၏စားသုံးမှုပြောင်းလဲစရာမလိုဘဲ။ R121919 သည်အာဟာရပြည့်ဝသောအစားအစာ (P အဆင့်) သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့်အလွန်အာဟာရရှိသောအာဟာရဓာတ်များစားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။သဖန်းသီး။ 1A) ။ လွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှုမှာ CRF1 အဆိုပါအရေးပါတယ်လို့အစားအစာ (ကို C အဆင့်) မှဆုတ်ခွာ Chow / အာခေါင်ကြွက် (အတွင်းလျော့နည်းအရေးပါတယ်လို့ Chow ၏ receptor ရန်တိုးမြှင့်စားသုံးမှုသဖန်းသီး။ 1B) ။ အစားအသောက်ဇယား×မူးယစ်ဆေးဆေးသောက်ရန်: ထို့ကြောင့်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာ Chow hypophagia နှင့်ကျော်နှစ်ဦးစလုံး blunting အသုံးပြုပုံ R121919 စားသုံးမှုစက်ဘီးစီးခြင်း (ပထမအရေးပါတယ်လို့ P ကိုအဆင့်နှင့် C အဆင့် Chow မှပထမဦးဆုံးဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းစားသုံးမှုအကြားခြားနားချက်များ၏လွှဲခွင် attenuated: F3,54 = 7.25, P <0.001) (သဖန်းသီး။ 1C) ။ CRF-CRF တစ်တိုးတက်သောစုဆောင်းမှု supporting1 အစားအသောက်များတွင်သမိုင်းအသုံးပြုပုံထက်တစ်ခုစူးရှတဲ့အစားအစာအကျိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့်စနစ်များ, R121919 အစားအသောက်များတွင်ဖို့တစ်ခုတည်းထိတွေ့ပြီးနောက်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာစားသုံးမှုကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာကနေပထမဦးဆုံးဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း Chow စားသုံးမှုတိုးမြှင့်ဘူး (သင်္ဘောသဖန်း။ S3).
သင်္ဘောသဖန်း။ 1 ။
အဆိုပါ CRF ၏ဆိုးကျိုးများ1 (အတွင်းတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာ 121919-ဇအစားအစာစားသုံးမှုအပေါ်အဲဒီ receptor ရန် R1 (-0 ဇ pretreatment, 5, 10, 20 နှင့်3/ ကီလိုဂရမ်, SC mg)Aအဆိုပါအရေးပါတယ်လို့စားနပ်ရိက္ခာပွုပွငျ access ကိုအပေါ်သို့): P အဆင့် (), (Bကြွက်ဟာအရေးပါတယ်လို့ထံမှဆုတ်ခွာခဲ့ကြသောအခါ) ကို C အဆင့် ( ...
အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကနေဆုတ်ခွာလည်း (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်11) ။ ကြောင်း CRF အဆိုပါယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့1 receptors အရေးပါတယ်လို့စာကနေဆုတ်ခွာအတိုင်းလိုက်နာသောအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်းဘုတ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြတယ်, ကြွက် R121919 (0, 20 / ကီလိုဂရမ်, SC, 1-ဇ pretreatment mg) နှင့်မြင့်မားသောပေါင်း-ဝင်္ (တစ်ဦးအကြား-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းအတွက်စမ်းသပ်ပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်14Chow ဖို့အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှ switched ခံရပြီးနောက်), 5-9 ဇ။ ယာဉ်-ကုသ Chow / အာခေါင်ကြွက် (အစားအသောက်များတွင်စက်ဘီးစီးခြင်း၏7ရက်သတ္တပတ်ကနေဆုတ်ခွာစဉ်ကတစ်ဦး anxiogenic တူသောအကျိုးသက်ရောက်ထင်ဟပ် Chow-အောင်ကျွေးထိန်းချုပ်မှုထက်လျော့နည်းပွင့်လင်းသောလက်ရုံးတော်အချိန်ပြသဖန်းသီး။ 2A), တစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသေးပါ (သာနှစ်ခုဆုတ်ခွာသံသရာပြီးနောက်မသိမမြင်ရသင်္ဘောသဖန်း။ S4) ။ R121919 နှင့်အတူ Pretreatment (20, Chow ၏အရေးပါတယ်လို့စားနပ်ရိက္ခာနှင့်အောက်တွင်နှစ်ခုစလုံးကျော် modulated ကြောင်းဆေးထိုး / ကီလိုဂရမ် mg) Chow ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ပေါင်း-ဝင်္အပြုအမူပြောင်းလဲပစ်မယ့်ဆေးထိုးမှာအာခေါင် Chow / ကြွက်များအားဖြင့်ပွင့်လင်းလက်မောင်းတူးဖော်ရေးအတွက်ကျဆင်းခြင်းပိတ်ဆို့ ( အစားအသောက်ဇယားဆေးသောက်ရန်×: F1,43 = 7.25, P <0.02; သဖန်းသီး။ 2တစ်ဦးကလက်ဝဲ) ။ R121919 အုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ထားသောလက်မောင်း entries တွေကိုအဖြစ်တိုင်းတာယေဘုယျလှုပ်ရှားမှုမပြောင်းခဲ့ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်, R121919 CRF ၏စုဆောင်းမှုအကြံပြုခြင်း, ထိန်းချုပ်မှု၏အပြုအမူပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ, အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကနေဆုတ်ခွာနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူပိတ်ဆို့1 စနစ်များကို။
သင်္ဘောသဖန်း။2။
အဆိုပါ CRF ၏ဆိုးကျိုးများ1 အဲဒီ receptor ရန် R121919 မြင့်မားသောပေါင်း-ဝင်္အပြုအမူအပေါ် (-1 ဇ pretreatment, 0, 20, SC / ကီလိုဂရမ် mg) (n = 47) နှင့်တိုးတက်သော-အချိုးနည်းအရေးပါတယ်လို့များစားစရာဘို့တုံ့ပြန် (n အရေးပါတယ်လို့စာကနေဆုတ်ခွာအထီး Wistar ကြွက်များတွင် = 17) ...
အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကနေဆုတ်ခွာလည်း (လျော့နည်းနှစ်သက်သောအစားအစာရရှိရန်စိတ်ခွန်အားနိုးလိုငွေပြမှုမှ hypohedonic ကဲ့သို့သောအပြုအမူတစ်ခုအလားအလာအညွှန်းကိန်းဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်10) ။ analog, အားဖြည့်များ၏တိုးတက်သော-အချိုးအချိန်ဇယားအောက်တွင်လျော့နည်းနှစ်သက်သော gustatory စစ်ကူများအတွက်တုံ့ပြန်ယခင်က (အညွှန်းကိန်းမှမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာစဉ်ကမြင်ပြီစိတ်ခွန်အားနိုးလိုငွေပြမှုကိုအသုံးပြုထားပြီး15) ။ CRF များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်1 receptors, ကျွန်တော်တစ်ဦးတိုးတက်သော-အချိုးအချိန်ဇယားအောက်တွင်သူတို့၏လျော့နည်းနှစ်သက်သော Chow ရရှိရန်အစားအသောက်များတွင်-cycle ကြွက်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် R121919 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ အတည်ပြုယခင်တွေ့ရှိချက်များ (10), မော်တော်ယာဉ်-ကုသ Chow / အာခေါင်ကြွက် (နည်းအရေးပါတယ်လို့ Chow ရရှိရန်လုပ်ကိုင်ဖို့လျှော့လှုံ့ဆျောမှုပြသနေတဲ့လျော့နည်းသွား breakpoints အားဖွငျ့ထင်ဟပ်နှင့် Chow / Chow ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါထုတ်လွှတ်စုစုပေါင်းတုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းသွား10()သင်္ဘောသဖန်း။ S5) ။ R121919 pretreatment ရွေးချယ် Chow ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ထိရောက်မှုခဲ့တဲ့ဆေးထိုးမှာတဲ့အစားအစာ-cycle ကြွက်များတွင်တိုးတက်သော-အချိုးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်လိုငွေပြမှုကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ (20, Chow hypophagia တိုးပွားလာအရေးပါတယ်လို့အစားအစာ hyperphagia လျှော့ချခြင်းနှင့် anxiogenic ကဲ့သို့သောအပြုအမူလျှော့ချအတွက်ထိရောက်သောဆေးထိုး / ကီလိုဂရမ် mg) (breakpoints အား: မူးယစ်ဆေး×အစားအသောက်ဇယား: F1,15 = 8.17, P <0.02; စုစုပေါင်းတုံ့ပြန်မှု: အစားအသောက်အချိန်ဇယား×မူးယစ်ဆေးဝါး: F1,15 = 9.14, P <0.01; သဖန်းသီး။ 2B,) ထားခဲ့တယ်။ R121919 postingestive satiation လျော့ကျလာခြင်းဖြင့် Chow / အာခေါင်ကြွက်များတွင်စွမ်းဆောင်ရည် facilitated သောအခြားရွေးချယ်စရာအနက်ကိုဆန့်ကျင်, R121919 အဲဒီ session သို့အဖြစ်အစောပိုင်း5မိအဖြစ်တုံ့ပြန်အတွက်လိုငွေပြမှုကိုပိတ်ဆို့ထား (အစားအသောက်ဇယားမူးယစ်ဆေး×: F1,15 = 2.55, P <0.05) (သဖန်းသီး။ 2B ကိုညာ) ။ ထို့ကြောင့် CRF1 အဲဒီ receptor ရန်တိုးတက်သော-အချိုးအလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကနေဆုတ်ခွာတိရိစ္ဆာန်များတွင်တွေ့မြင်ကြောင်းလျော့နည်းနှစ်သက်သော gustatory စစ်ကူများအတွက်တုံ့ပြန်အတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးလိုငွေပြမှုကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ။
အရေးပါတယ်လို့စာကနေဆုတ်ခွာစိတ်ဖိစီးမှု-related extrahypothalamic CRF system ကိုသက်ဝင်စေအံ့သောငှါ၎င်းယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့, amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် CRF mRNA နှင့် peptide ၏အဆင့်ဆင့်အသီးသီးအရေအတွက် Real-time PCR နှင့် RIA ဖြင့်တိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ ကြွက်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်7ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်ကျွေး Chow များအတွက်အစားအစာ-cycle ခဲ့ကြသည်။ မေ့ဆေးနှင့်ယင်းသို့ခေါင်းဖြတ်စီရင်ပြီးနောက်, amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယကနေဦးနှောက်လာကြတယ်ထံမှနှင့်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှဝင်ရောက်ခွင့်သက်တမ်းတိုးပြီးနောက်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အာခေါင် Chow / ကြွက်များတွင်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာဆုတ်ခွာ (Chow / Chow ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပု amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် CRF mRNA စကားရပ်ထဲမှာငါးဆတိုးသွေးဆောင်သဖန်းသီး။ 3A) ။ ပြောင်းပြန် CRF mRNA ထိန်းချုပ်တူသောမှအဆင့်ဆင့်အရေးပါတယ်လို့စားနပ်ရိက္ခာပွုပွငျ access ကိုအတူပြန်လာသော (F2,19 = 6.97, P <0.01) ။ CRD ၏တိုးတက်သောစုဆောင်းမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသော Chow / Palatable ကြွက်များကိုတစ်ကြိမ်သာစက်ဘီးစီးသောအခါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယတွင် CRF mRNA ဖော်ပြမှုသည်မပြောင်းလဲပါ (Chow / Chow vs. Chow / Palatable: 5.5 ± 2.2 vs. 6.3 ± 1.7 ns) CRF1 အစားအသောက်များတွင်သမိုင်းအသုံးပြုပုံထက်အစားအသောက်များတွင်တစ်ခုစူးရှသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့်စနစ်များကို။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, CRF mRNA စကားရပ် (တွေ့ရှိချက်များ၏ဒေသဆိုင်ရာတိကျတဲ့ထောက်ပံ့ခြင်း, နျူကလိယ accumbens, prefrontal cortex သို့မဟုတ်နောက်ကျနေခဲ့သည် cortex အတွက်မပြောင်းခဲ့ဘူးသင်္ဘောသဖန်း။ S6) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ CRF mRNA စကားရပ်မသိသိသာသာပြောင်းလဲမှု hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယတွင်သို့မဟုတ် Chow / အာခေါင်ကြွက် (ထဲမှာအတူတူပင်ဆုတ်ခွာအချိန်အမှတ်မှာ corticosterone ပျံ့နှံ့နေတဲ့အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်သင်္ဘောသဖန်းသီး။ S6 နှင့် S7), အစား hypothalamic ထက် amygdalar အတွက်ပြောင်းလဲသောအယူအဆအကြံပြုခြင်း, CRF စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ Proximity သည့်အပြုအမူဆိုင်ရာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင် subserved ။ ထို့ပြင်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာကနေဆုတ်ခွာတိရိစ္ဆာန်များ၏ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် CRF peptide immunoreactivity (70 Chow-ကျွေးမွေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ထက်% ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ပေမယ့် Chow-အောင်ကျွေးဖို့ထိန်းချုပ်မှုအဆင့်ဆင့်ဟာအရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူပြန်ရောက်F2,24 = 4.01, P <0.01) (သဖန်းသီး။ 3B) ။ ထို့ကြောင့်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာဆုတ်ခွာမူးယစ်ဆေးနှင့်အီသနောဆုတ်ခွာ၏မော်ဒယ်များအတွက်တွေ့ရှိချက်မှအလားတူအဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယထဲတွင်စိတ်ဖိစီးမှု-related CRF peptide စနစ်က activated (7, 8) ။ အရေးပါတယ်လို့စားနပ်ရိက္ခာပွုပွငျ access ကိုပု amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် extrahypothalamic CRF system ကို activation လျော့နည်းသွားသောကြောင့်, ဌာန၏ CRF activation (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်16), ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုလည်း (အရေးပါတယ်လို့အစားအစာ abstinence ၏အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်အကျိုးဆက်များသက်သာရာအားဖြင့်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများဆည်းပူးအံ့သောငှါအကြံပြု17).
သင်္ဘောသဖန်း။3။
(အပေါ်အရေးပါတယ်လို့အစားအသောက်များတွင် Alternative ၏ဆိုးကျိုးများA) CRF mRNA နှင့် (Bအဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယတွင်) CRF peptide စကားရပ်။ ကြွက် (n = 45)7ပတ်တဲ့အစားအစာ-cycle ခဲ့ကြသည်, ထို amygdala လာကြတယ်၏ဗဟိုနျူကလိယစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ CRF mRNA နှင့် peptide နှစ်ဦးစလုံး ...
အရေးပါတယ်လို့စာကနေဆုတ်ခွာကြွက် CRF မှတိုးချဲ့ sensitivity ကိုပြခြင်းငှါ၎င်းအယူအဆစမ်းသပ်ဖို့1 အီသနောဆုတ်ခွာကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ရသော amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယထဲမှာအချက်ပြγ-aminobutyric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား), (များ၏ရန်မော်ဂျူ18), ကျွန်တော်တစ်ဦးအချပ်ပြင်ဆင်မှုအတွက် amygdala အာရုံခံ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏ GABAergic ဂီယာအပေါ် R121919 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အထီး Wistar ကြွက် (n = 14)7ပတ်တဲ့အစားအစာ-စက်လီးစီးခြင်းတို့နည်းအရေးပါတယ်လို့ Chow မှ switched ခံရပြီးနောက်ယဇ်ပူဇော်ကြ၏။ အဆိုပါ amygdala synapses ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် Basal GABAergic ဂီယာ (အစားအသောက်များတွင်သမိုင်းနှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြားဘူးn ဂါဘမြို့သား-inhibitory postsynaptic အလားအလာ (IPSP) ကျလာသောဖို့အသုံးပြုအားလုံးနှိုးဆွပြင်းထန်ဖြတ်ပြီး = 23 ဆဲလ်) ။ သို့သော် R20 (121919 μM) နဲ့ 1 မိ superfusion evoked ဂါဘမြို့သားတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောလျှော့ချရေးသွေးဆောင်A30 ± 6%: Chow / အာခေါင်ကြွက် (M ± SEM ရဲ့ amygdala အာရုံခံ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် -IPSPs n9± 12%: Chow-အောင်ကျွေးထိန်းချုပ်မှု (M ± SEM သူတို့အတွက်ထက် =6ဆဲလ်) P <0.05, n = 11 ဆဲလ်) (သဖန်းသီး။ 4) ။ တစ်ဦး 30 မိ washout ကာလအပြီးတွင်နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများ၏ IPSPs ဆင်တူ, အခြေခံကဲ့သို့အဆင့်ဆင့်သို့ပြန်သွား၏။ အဆိုပါ amygdala CRF-CRF ၏ overactivation နှင့်အတူထိုကွောငျ့, တသမတ်တည်း1 အီသနောဆုတ်ခွာစဉ်ကမြင်ကြစနစ်နှင့်ဆိုးကျိုးများ (18), အစားအသောက်များတွင်-cycle ကြွက်တစ်ဦး CRF ၏ inhibitory သက်ရောက်မှုတစ်ခုတိုးလာ sensitivity ကိုပြသ1 အဆိုပါ amygdala GABAergic ဂီယာ၏ဗဟိုနျူကလိယအပေါ်အဲဒီ receptor ရန်။
အဆိုပါ CRF ၏ဆိုးကျိုးများ1 ဂါဘမြို့သားအပေါ်အဲဒီ receptor ရန် R121919Aအထီး Wistar ကြွက် (များတွင်အရေးပါတယ်လို့အစားအသောက်များတွင် access ကိုပြောင်းတဲ့သမိုင်းပြီးနောက် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် -IPSPsn = 14) အရေးပါတယ်လို့အစားအစာရရှိမှုကနေဆုတ်ခွာ။ (A) R121919 သိသိသာသာလျော့နည်းသွား ...
အဆိုပါစုပေါင်းရလဒ်များကိုအရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, တိုးချဲ့သုံးစွဲနိုင်တဲ့သမိုင်းစိတ်ဖိစီးမှု-related extrahypothalamic CRF-CRF အတွက်တိုးတက်သော, motivationally သက်ဆိုင်ရာ neuroadaptations မှဦးဆောင်ပြုလုပ်အလုပ်လုပ်တဲ့သက်သေအထောက်အထားပေး1 စနစ်များကို။ အထူးသဖြင့်ရွေးချယ် CRF1 differential နဲ့ရွေးချယ်အဲဒီ receptor ရန် R121919 အစားအသောက်များတွင်-cycle ကြွက်များတွင်ထိခိုက်နစ်နာနို့တိုက်ကျွေးရေး, ပုံမှန်အစည်းအဝေး Chow စားသုံးမှုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း access ကိုအပေါ်သို့အလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာ၏စားသုံးမှုကျဆင်း။ အဆိုပါ CRF1 အဲဒီ receptor ရန်လည်းရွေးချယ်သည့်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာကနေဆုတ်ခွာစဉ်ကမြင်ကြခဲ့လျော့နည်းနှစ်သက်သော Chow များအတွက်တုံ့ပြန်အတွက်တိုးမြှင့်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးလိုငွေပြမှုပိတ်ဆို့။ အဆိုပါအရေးပါတယ်လို့အစားအသောက်များတွင် access ကိုဆုတ်ခွာပြုမှုအသစ်ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူဖယ်ထုတ်ပစ်ခဲ့သက်ရောက်မှုသည် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် CRF ဗီဇနှင့် peptide စကားရပ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အစားအသောက်များတွင်-cycle ကြွက်တစ်ဦး CRF ၏ inhibitory သက်ရောက်မှုတစ်ခုတိုးလာ sensitivity ကိုပြသ1 နောက်ထပ် amygdala CRF-CRF ၏ overactivation အကြံပြုခြင်းအဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် GABAergic ဂီယာအပေါ်အဲဒီ receptor ရန်,1 စနစ်။ သက်တမ်းတိုး access ကိုအပေါ်သို့အရေးပါတယ်လို့အစားအစာများ၏ကျော် CRF မှ CRF နှင့် electrophysiological sensitivity ကိုတိုးစကားရပ်အဖြစ်မြင်ရုံပြီးစီးခဲ့ဆုတ်ခွာကာလ၏တိုးလာ CRF system ကို activation မှဖြစ်ပေါ်စေမည်1 အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယထဲမှာအဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း။ CRF1 ရန် pretreatment အရေးပါတယ်လို့အစားအစာရရှိမှုဖြင့်ကနဦးနေဆဲပစ္စုပ္ပန် CRF-CRF ဆန့်ကျင်ဘတ်ဖြစ်ပါတယ်ရုံမရောက်မီ1 ဆုတ်ခွာ၏ system ကို overactivation ။ မဟုတ်ရင်တည်းကကုသမှုမရှိဘူးတိရိစ္ဆာန်များတွင်တွေ့မြင်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာကျော်၏အကျဉ်းချုပ်ကိုအချိန်သင်တန်း (10), ဟူသောအသုံးအနှုနျးအရာအားဖြင့်အချိန်သင်တန်းကိုထင်ဟပ်လွှတ်ပေးရန်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတွင်တွေ့မြင်အဖြစ်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှဝင်ရောက်ခွင့်, ပြန်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်က CRF peptide ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပုံမှန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာစားသုံးခြင်း Anti-ဆုလာဘ် CRF-CRF ၏စုဆောင်းမှုနှင့်အတူဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်များအတွက် allostatic ပြောင်းကုန်ပြီသွေးဆောင်ခြင်းငှါ1 အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက်စနစ်များကို။
ဤရလဒ်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောစားဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းလှုံ့ဆျောမှုများအတွက်သာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ hedonic စနစ်များ၏ထပ်ခါတလဲလဲ activation CRF ၏ဦးနှောက် (ဆိုလိုသည်မှာစုဆောင်းမှုအတွက်ပြိုင်ဘက်ကဲ့သို့ဖြစ်စဉ်များရူးနှမ်း1 circuitry) ဆုလာဘ် transmitter ကိုစနစ်များအတွက် function ကိုတစ်ဦးရိုးရှင်းသောအရှုံးကနေကွဲပြားကြ၏။ ထိုသို့သောအကြား-system ကို neuroadaptations (19) ကိုလည်း (အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးအပေါ်မှီခိုဖို့အကူးအပြောင်းကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်7, 8) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ Non-မူးယစ်ဆေးလှုံ့ဆော်မှုမှအထွေထွေ (စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များအချိန်ကျော် hedonic လှုံ့ဆော်မှုများ၏ပြင်းထန်မှုအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲထူးခွားသညျ့တွေ့ကြုံခံစားတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုအကြံပြု20) ။ အလိုက်သင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည်အစားအစာရှာဖွေခြင်းနှင့်ကောက်ယူသောအပြုအမူများကိုစွမ်းအင်သိပ်သည်းစွာ ၀ င်ငွေမြင့်မားသောအစားအစာများဆီသို့ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ စွမ်းအင်ကြွယ်ဝသော၊ အနိမ့်ဆုလာဘ်အစားအစာများ (သို့မဟုတ်အစားအစာမဟုတ်သော) များရရှိရန်အားထုတ်မှုများ၊ အစာကျွေးခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များ (ဥပမာ - သားကောင်နှင့်ထိတွေ့ခြင်း၊ အချိန်နှင့်ခွန်အားအရင်းအမြစ်များ) ။ သို့သော်ယနေ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလားတူဖြစ်စဉ်များသည်အရသာလျော့နည်းသော်လည်းအာဟာရရှိသောအခြားနည်းလမ်းများကြောင့်အဝလွန်ခြင်းကိုတိုးပွားစေသည့်အစားအစာများကိုစားသုံးစေနိုင်သည်။
CRF အတွက်ထို့ကြောင့်စွဲတူသောအပြောင်းအလဲ1 စနစ်များ (drive ကိုကူညီစေခြင်းငှါiစွမ်းအင်သိပ်သည်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာများ၏) စားသုံးမှု, (ii) ကျန်းမာသန်စွမ်းအခြားနည်းလမ်းများ underconsumption, နှင့် (iii) အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှဝင်ရောက်ခွင့်တားဆီးသောအခါဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ် (4, 5, 10-12, 17) ။ လူ့အခွအေနေမှဘာသာပြန်ထားသော, CRF system ကို activation relapse အဝလွန်ခြင်းအတွက်စားနှင့်ဆက်စပ်အစာစားခြင်းမမှန်မှုများအဖြစ်အရေးပါတယ်လို့စာကနေသိသိ abstinence တခြားအပျက်သဘောစိတ်ခွန်အားနိုး sequelae မြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်။
အထီး Wistar ကြွက် (n = 155 ရက်ပေါင်းဟောင်း 180, 230-45 ဂရမ်) မှာ 19 ဇအတွက် (10.5 × 8 12 လက်မ×) ချားလ်စ်မြစ်မှရရှိသောနှင့်ဝါယာကြိုး-ထိပ်ဆုံး, ပလပ်စတစ်အိတ်များအတွက်ဆိုက်ရောက်အပေါ်သို့ Single-သျောခဲ့ကြသည်: 12 ဇပြောင်းပြန်အလင်းသံသရာ (10 : 00 ဇ humidity- (60%) နှင့်အပူချိန်ထိန်းချုပ်ထားသော (22 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) vivarium) ချွတ်ထွန်း။ ယင်းမတိုင်မီ 485 တစ်ပတ်နဲ့ရေကြော်ငြာ libitum: ကြွက်ပြောင်းဖူး-based ကြွက် Chow မှဝင်ရောက်ခွင့် [7012% (kcal) ဘိုဟိုက်ဒရိတ်, 65% ဆီဥ, 13% ပရိုတိန်း, metabolizable စွမ်းအင် 21 ကယ်လိုရီ / 341 ဆ Harlan Teklad LM-100 အစားအသောက် 1] ရှိခဲ့ စမ်းသပ်ချက်များက start ။ ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန် (85 ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော NIH ထုတ်ဝေမှုအရေအတွက်ကို 23-1996,) ၏အမျိုးသား Institutes နှငျ့ "ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှု၏အခြေခံမူများ" ကိုလိုက်နာစမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (http://www.nap.edu/readingroom / bookslabrats) နှင့် The Scripps Research Institute မှများ၏ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
et al ချန်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း R121919 ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ (21) ။ R121919 (ကမြင့်မားသောဆှဖှေဲ့ဖြစ်ပါသည်Ki = 3.5 nm) ရွေးချယ် CRF1 များစွာသောအခြား CRF ထက်သာလွန် physiochemical ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူရန်1 ရန် (ဥပမာ, ရေနိုင်မှုတိုးတက် logP နှင့် logD လျော့နည်းသွား) (13) ။ စမ်းသပ်ခြင်းအဘို့, R121919 ပထမဦးဆုံး 1 M က HCl (နောက်ဆုံးပမာဏ၏ 10%) အတွက် solubilized ခဲ့ပါတယ်, ထို့နောက် 20% (wt / vol) 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (Sigma-Aldrich) ၏နောက်ဆုံးမော်တော်ယာဉ်မှကြဲ, back-titrated နှင့်အတူ သော pH 4.5 မှ NaOH ။ အဆိုပါ R121919 ဖြေရှင်းချက်2mL / ကီလိုဂရမ်တစ် volume ထဲမှာ SC (SC) အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
ကြော်ငြာ Libitum အစားအသောက် Alternative ။
acclimation ပြီးနောက်ကြွက်ယခင် 3-4 လက်ထက် မှစ. အစားအစာစားသုံးမှု, ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အစာကျွေးခြင်းထိရောက်မှုတို့အတွက်လိုက်ဖက်အုပ်စုနှစ်စုခွဲခဲ့ကြသည်။ တဦးတည်းအုပ်စုတစ်စုတစ်ပတ်ကိုကြော်ငြာ libitum7ရက်ပေါင်း (Chow / Chow) မှာ Chow အစားအစာ ( "Chow") ပေးအပ်ခဲ့ကာဒုတိယအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီအပတ်ကအလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့ဖို့ကြော်ငြာ libitum လက်လှမ်း၏5ရက်ပေါင်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်2နေ့ရက်ကာလအဘို့ Chow ကြော်ငြာ libitum ထောက်ပံ့ခဲ့သည် ချောကလက်အနံ့, High-sucrose အစားအစာ ( "အာခေါင်"; Chow / အာခေါင်) ။ အဆိုပါအရေးပါတယ်လို့အစားအသောက်များတွင်အဆိုပါ Chow အစားအသောက်များတွင် [TestDiet မှ macronutrient အချိုးအစားနှင့်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆအတွက်နှိုင်းယှဉ်သောအာဟာရပြည့်စုံ, ချောကလက်-အနံ့, High-sucrose (50% kcal), AIN-76A-based အစားအစာဖြစ်၏ ချောကလက်-အနံ့ဖော်မြူလာ 5TUL: 66.8% (kcal) ဘိုဟိုက်ဒရိတ်, 12.7% ဆီဥ, 20.5% ပရိုတိန်း, metabolizable စွမ်းအင် 3.48 kcal / g; ယင်း၏ကြိုက်သောတိုးမြှင့်ဖို့ 45-mg ကိုတိကျစွာအစားအစာလုံးလေးများအဖြစ်ဖော်စပ် (22, 23)] ။ brevity များအတွက်တစ်ဦးချင်းစီရက်သတ္တပတ်၏ပထမဦးဆုံး5ရက်ပေါင်း (သာ Chow) နှင့်နောက်ဆုံး2ရက်ပေါင်း (Chow သို့မဟုတ်စမ်းသပ်အုပ်စုနှင့်အညီအရေးပါတယ်လို့) C နဲ့: P အဆင့်အဖြစ်အားလုံးစမ်းသပ်ချက်အတွက်ရည်ညွှန်းကြသည်။ အစားအစာတစ်ပြိုင်နက်တည်းရရှိနိုင်ဘယ်တော့မှခဲ့ကြသည်။ Chow အစားအသောက်များတွင် 485-ဆ extruded လုံးလေးများမှ 7012- အဖြစ်ဖော်စပ် Harlan Teklad LM-65 အစားအသောက် 13 [21% (kcal) ဘိုဟိုက်ဒရိတ်, 341% ဆီဥ, 100% ပရိုတိန်း, metabolizable စွမ်းအင်5ကယ်လိုရီ /4ဂရမ်] သို့မဟုတ် 5TUM အစားအစာတစ်ခုခုကိုခဲ့ [65.5 % (kcal) ဘိုဟိုက်ဒရိတ်, 10.4% ဆီဥ, 24.1% ပရိုတိန်း, metabolizable စွမ်းအင် 330 ကယ်လိုရီ / 100 ပါ g; TestDiet] ။ ယခင်လေ့လာမှုများဆင်တူ, Harlan Teklad LM-485 Chow အဆိုပါနို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်မြင့်မားသောပေါင်း-ဝင်္စမ်းသပ်ချက် (များတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်11), နေချိန်တွင် TestDiet 5TUM Chow (10) ကိုတိုးတက်သော-အချိုး, CRF mRNA, CRF peptide အကြောင်းအရာ, corticosterone က RIA နှင့် electrophysiological စမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ယခင်ကထုတ်ဝေအဖြစ် (105TUL ချောကလက်အစားအသောက် (sugary အာခေါင်အစားအသောက်များတွင်) vs. Harlan LM-485 Chow (M ± SEM:), ဒုတိယအစားအသောက်များတွင်စပ်လျဉ်းအတွင်းပထမဆုံးအစားအစာများ၏နေ့စဉ်စားသုံးမှု (kcal) ၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တွက်ချက်ဆွေမျိုးအစားအသောက်များတွင်ဦးစားပေး, အောက်ပါခဲ့ကြသည် 90.7TUM Chow အစားအသောက် (3.6% ± M က± SEM preference ကို 5) vs. 5% ± preference ကို 91.2) နှင့် 3.7TUL ချောကလက်အစားအသောက် (sugary အာခေါင်အစားအသောက်များတွင်) ။
ဓာတ်လှေကား Plus အား-ဝင်္။
ဝါဂွမ်း et al မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းမြင့်မားသောပေါင်း-ဝင်္စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ (24) ။ Chow / အာခေါင်ကြွက် P ကို ​​(/ ကီလိုဂရမ် R7 (-20 ဇ, SC) Mg နှင့် Chow ဖို့အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှ switched ခံရပြီးနောက် 121919-1 ဇစမ်းသပ်ပြီးမှာအနည်းဆုံး5ပတ်တဲ့အစားအစာ-စက်လီးစီးခြင်းတို့ထို့နောက်မော်တော်ယာဉ်သို့မဟုတ်9ဖြစ်စေနှင့်အတူ pretreated ခဲ့ကြသည် →ကို C အဆင့်) ။ Chow / Chow ထိန်းချုပ်မှုကြွက် (ကများအကြား-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းတစ်ပြိုင်နက်တည်းစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်n = 47) ။ Chow အစားအသောက်များတွင်စမ်းသပ်ခြင်း၏အချိန်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင်ကြော်ငြာ libitum ရရှိနိုင်ခဲ့။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအဘို့, ကြည့်ရှု SI စာသား.
ဝါဂွမ်း et al ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းစားစရာဘို့အားဖြည့်များ၏တိုးတက်သော-အချိုးအချိန်ဇယားကိုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ (10) ။ တိရစ္ဆာန်များမဟုတ်ရင်သတ်မှတ်ထားသောမဟုတ်လျှင်တစ်ဦးက / ငါစမ်းသပ်မှုတစ်လျှောက်လုံးသူတို့ရဲ့နေအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာ (5 ဆ extruded လုံးလေးများ) Chow ကြော်ငြာ libitum ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ စားနပ်ရိက္ခာစစ်ကူအတွက် extruded အိမ်မှာလှောင်အိမ် Chow အစားအသောက်များတွင်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်တူညီ 45-မီလီဂရမ် Chow-တိကျစွာလုံးလေးများရှိကြ၏။ အစည်းအဝေးများဘာသာရပ်များအတွက် breakpoints အားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးပြီးစီးခဲ့အချိုးအစားနှင့်အတူ, 14 မိများအတွက်အချိုးအစားဖြည့်စွက်ခဲ့ပါဘူးသည့်အခါအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ Chow / အာခေါင်ကြွက်ကအနည်းဆုံး7ပတ်တဲ့အစားအစာ-စက်လီးစီးခြင်းတို့ထို့နောက် (P →ကို C အဆင့်) Chow ဖို့အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှ switched ခံရအချိန်တွင် R121919 (-1 ဇ, SC) နှင့်အတူ pretreated ။ Chow / Chow ထိန်းချုပ်မှုကြွက် (ကများအကြား-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းတစ်ပြိုင်နက်တည်းစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်n = 17) ။ R121919 ၏ဆေးများ (0, 20 / SC ကီလိုဂရမ်ကိုယ်အလေးချိန် mg) နှစ်ခုအစားအသောက်များတွင်သံသရာတစ်လျှောက်တစ်ဦးအတွင်း-ဘာသာရပ်များ, counterbalanced ဒီဇိုင်းအတွက်ပေးထားခဲ့ကြသည်။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအဘို့, ကြည့်ရှု SI စာသား.
quantitative ရီးရဲလ်အချိန် PCR ။
ကြွက် (n = 20),7ပတ်ကြာအစားအစာ - စက်ဘီးထုံဆေးနှင့်နှစ်ခုအစားအသောက်အခြေအနေများ (အသီးအသီးအပတ်စဉ်သံသရာ၏ရက်ပေါင်း5နှင့် 7) ကာလအတွင်း decapitated ခဲ့ကြသည်။ ဦး နှောက်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ပြီး ဦး နှောက်မျက်နှာပြင်မှာ coronally ဖြတ်လိုက်ပြီး amygdala, nucleus accumbens, insular cortex နှင့် prefrontal cortex လာကြတယ်တွေရဲ့အလယ်ဗဟိုနျူကလိယမှာရေခဲပြင်အေးခဲနေတုန်းပဲ။ စုစုပေါင်း RNA ကိုတိရိစ္ဆာန်များတစ်သျှူးများမှ RNA ထုတ်ယူခြင်းအတွက်ပုံမှန် protocol ကိုအသုံးပြု။ ဦး နှောက်လာကြတယ်ကနေပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ စုစုပေါင်း RNA (1 μg) ထို့နောက်ထုတ်လုပ်သူရဲ့ညွှန်ကြားချက်နှုန်း Oligo (dT) 20 ၏ရှေ့တော်၌ကူးယူပြောင်းပြန်ခဲ့သည်။ အရေအတွက် RT-PCR တုံ့ပြန်မှု 20 μM primer နှင့် 0.5 mM MgCl သုံးပြီး4μLအသံအတိုးအကျယ်အတွက်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်2။ ရလဒ်များရည်ညွှန်းဗီဇ, CypA ၏စကားရပ်အဆင့်ဆင့်မှ Normal, ဒုတိယ-ဆင်းသက်လာနည်းလမ်းများအားဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်မတရားယူနစ်အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ ပေးထားသော sequence ကိုအားလုံးကို RT ကို-PCR တုံ့ပြန်မှုအတူတူပြေးအတွင်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအဘို့, ကြည့်ရှု SI စာသား.
Peptide အက်ဆစ် Extraction နှင့် CRF က RIA ။
ကြွက် (n = 25), ကိုအနည်းဆုံး7ပတ်တဲ့အစားအစာ-စက်လီးစီးခြင်းခဲ့ကြသည် anesthetized, ထိုသူနှစ်ယောက်အစားအသောက်များတွင်အခြေအနေများ (တစ်ဦးချင်းစီအပတ်စဉ်သံသရာ၏ရက်ပေါင်း5နှင့် 7) စဉ်အတွင်းခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံ။ ဦးနှောက်ကိုလျင်မြန်စွာဖယ်ရှားပြီး coroner လိုက်သည်ကိုတစ်ဦးနှောက် matrix ၌၎င်း, amygdala လာကြတယ်၏ဗဟိုနျူကလိယရေခဲ-အအေးဇာတ်စင်ပေါ်တွင်ကောက်ယူကြ၏။ Peptide အက်ဆစ်ထုတ်ယူခြင်း (တစ်ပြီးသားထူထောင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနောက်တော်သို့လိုက်25) ။ တစ်ရှူး CRF ကဲ့သို့ immunoreactivity က RIA Zorrilla et al ထံမှအဆင်ပြေအောင်တစ်ဦးအထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်တိကျသောအစိုင်အခဲ-အဆင့်နှင့်အတူ quantified ခဲ့သည်။ (26) ။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအဘို့, ကြည့်ရှု SI စာသား.
Corticosterone က RIA ။
ကြွက် (n = 12) အနည်းဆုံး7ပတ်ကြာအစားအစာ - စက်ဘီးခဲ့ကြသည်, နှင့်နှစ် ဦး ကိုအစားအသောက်အခြေအနေများ (အပတ်စဉ်သံသရာ၏နေ့ရက်များ5နှင့် 7) ကာလအတွင်းအမြီးသွေးနမူနာခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ညွှန်ကြားချက်အရ (cc cicicosterone ကဲ့သို့သောခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ၏ပလာစမာအဆင့်ကိုစီးပွားဖြစ်ရနိုင်သော RIA ကိရိယာဖြင့်သတ်မှတ်သည်) (MP Biomedicals, Inc. ) (26) ။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအဘို့, ကြည့်ရှု SI စာသား.
အဆိုပါ amygdala ချပ်ဗဟိုနျူကလိယ (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်27, 28) ကြွက်အနေဖြင့် (n အနည်းဆုံး7ပတ်တဲ့အစားအစာ-စက်လီးစီးခြင်းခဲ့ anesthetized နှင့်အရေးပါတယ်လို့စာကနေဆုတ်ခွာခံရပြီးနောက် 7-2 ဇခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ကွောငျး =3/ အုပ်စုသည်) ။ ဦးနှောက်လျှင်မြန်စွာ 95% အိုနှင့်အတူ gassed ရေခဲ-အအေးအတု cerebrospinal fluid (aCSF) သို့ဖယ်ရှားထားကြ၏2 နှင့် 5% CO2။ အချပ်, အဖြတ်အကြောင်းကို 30 မိများအတွက် interface ကိုစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးနှင့်လုံးဝနစ်မြုပ်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်နွေးနှင့်အတူ superfused ခဲ့ aCSF gassed ။ မူးယစ်ဆေးဝါး superfusate အတွက်လူသိများပြင်းအားရရှိရန်စတော့ရှယ်ယာဖြေရှင်းချက်ထံမှ aCSF မှဆက်ပြောသည်ခဲ့ကြသည်။ အသုံးပြုတဲ့ 2-4 mL / မိနစ် superfusion နှုန်းထားများမှာမူးယစ်ဆေးပြင်းအား 90 မိအတွင်းရေလှောင်ကန်အာရုံစူးစိုက်မှု၏ 2% ရောက်ရှိဖို့။
ကျနော်တို့အဆက်အသွယ်မရတဲ့ voltage- သို့မဟုတ်လက်ရှိ-ညှပ် mode ကိုသုံးပြီးချွန်ထက် micropipettes အတူ amygdala အာရုံခံ၏ဗဟိုနျူကလိယမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ကသူတို့သင်္ချိုင်းအမြှေးပါးအလားအလာအနီးအများဆုံးအာရုံခံကျင်းပခဲ့တယ်။ ဒေတာကိုတစ်ဦး preamplifier နှင့်အတူဝယ်ယူခြင်းနှင့် pClamp software ကိုသုံးပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်သိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည်။ Pharmacologically အထီးကျန်ဂါဘမြို့သားA အဲဒီ receptor-mediated inhibitory postsynaptic အလားအလာ (ဂါဘမြို့သားAအဆိုပါအချိုမှု receptor blockers CNQX နှင့် APV နှင့်ဂါဘမြို့သား superfusing စဉ် -IPSPs) လျှပ်ကူးပစ္စည်းကိုနှိုးဆွတဲ့စိတ်ကြွမှတဆင့် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်းဒေသအလိုက်လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့် evoked ခဲ့ကြသည်B အဲဒီ receptor blocker CGP 55845A ။ တစ်ဦးချင်းစီဆဲလ်များအတွက်တုံ့ပြန်မှု parameters များကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျနော်တို့အနေနဲ့ input ကို-output ကို protocol ကိုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ရေစီးကြောင်းတစ်ခုအကွာအဝေးအများဆုံးလွှဲခွင်ထုတ်ယူနိုင်ရန်လိုအပ်သောဗို့အားအထိတစ်ဦး IPSP ထုတ်ယူနိုင်ရန်လိုအပ်သောတံခါးခုံကိုလက်ရှိအချိန်တွင်စတင်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ 1-3 ×အဖြစ်တန်းတူခြေလှမ်းများ (တံခါးခုံ, ဝက်အကျယ်ချဲ့ခြင်း, အလုပျသ) ၏သုံးလှုံ့ဆော်မှုပြင်းထန်ပုံမှန်။ Hyperpolarizing နှင့်လက်ရှိခြေလှမ်းများ (200-PA နှစ်တိုး, 750-ms ကြာချိန်) depolarizing လည်းဗို့-လက်ရှိ (VI ကို) ခါးဆစ် generate မှလျှောက်ထားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ Clampfit ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်း evoked IPSP amplitude နှင့် VI ကိုတုံ့ပြန်မှု quantified ။ အားလုံးအစီအမံအတွက်ရွေးချယ် CRF နှင့်အတူ superfusion မတိုင်မီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်1 အဲဒီ receptor ယင်း၏ superfusion (121919 မိ) ကာလအတွင်းရန် R1 (20 μM), နှင့်ကိုအောက်ပါ washout (30 မိ) ။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအဘို့, ကြည့်ရှု SI စာသား.
အုပ်စုလိုက်နှိုင်းယှဉ်မှုသည်ကျောင်းသား၏ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် t-tests (Two-အုပ်စုကိုနှိုင်းယှဉ်) သို့မဟုတ်ကှဲလှဲ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ANOVA) (အနည်းဆုံးသုံးအုပ်စုကိုနှိုင်းယှဉ်), သိသာ omnibus သက်ရောက်မှုပြီးနောက်ရိုးရှင်းသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်သို့မဟုတ် Newman က-Keuls နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်အနက်အဆုံးစွန် (P <0.05) ။ နို့တိုက်ကျွေးရေးစမ်းသပ်မှုကနေအချက်အလက်တွေကို Diet Schedule နဲ့သုံးမျိုးရောနှောထားတဲ့ ANOVAs တွေကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အကြား - ဘာသာရပ်များအချက်အနေနှင့် Dose နဲ့ Diet Phase အနေဖြင့်အတွင်း - ဘာသာရပ်အချက်များအဖြစ်။ မြင့်မားပေါင်း - ဝင်္စမ်းသပ်မှုကနေဒေတာတွေကိုအကြား - ဘာသာရပ်များအချက်များအဖြစ် Diet ဇယားနှင့် Dose နှင့်အတူ Two- လမ်း ANOVAs အားဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။ အားဖြည့်စမ်းသပ်မှု၏တိုးတက်သောအချိုးအစားဇယားအတွက် breakpoint နှင့်စုစုပေါင်းတုန့်ပြန်မှုများကို Diet ဇယားနှင့်အပြန်အလှန်ရောနှောထားသော ANOVAs များအကြား - ဘာသာရပ်များအချက်နှင့် Dose အတွင်းအတွင်း - ဘာသာရပ်များအချက်အနေဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ ပထမ ၅ မိနစ်အတွင်းတုန့်ပြန်မှု၏အချိန်ကာလကိုသုံးဖက်မြင် ANOVAs များက Diet Schedule နှင့်အကြား - ဘာသာရပ်အချက်များ၊ Dose and Time အတွင်း - ဘာသာရပ်အချက်များအဖြစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ electrophysiological လေ့လာမှုများမှအချက်အလက်များကို ANOVA နှင့် ANOVA အတွင်းရှိဘာသာရပ်များအကြားသင့်လျော်သည့်အတိုင်း ထပ်မံ၍ တိုင်းတာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ corticosterone RIA မှအချက်အလက်နှစ်မျိုးဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသော ANOVA ကို Diet Schedule နှင့်အကြား - ဘာသာရပ်အချက်နှင့် Diet အဆင့် - အတွင်း - ဘာသာရပ်အချက်အနေဖြင့်ရောနှောထားသည်။ အသုံးပြုသည့်စာရင်းအင်းအစီအစဉ်များမှာ Instat 5၊ Prism 3.0 (GraphPad), Systat 4.0 နှင့် SPSS 11.0 (SPSS) တို့ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီအတွက်အယ်ဒီတာ့အာဘော်အကူအညီအတွက်သူ Mike Arends, အုပ်ချုပ်ရေးအကူအညီအတွက်သူ Mary Gichuhi, နဲ့ Bob Lintz, Jeanette Helfers, Stephanie Dela Cruz နှင့် Molly နန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းကိုဆီးချိုရောဂါနှင့် Digestive အမျိုးသားအင်စတီကျုနှင့်ကျောက်ကပ်ရောဂါများထောက်ပံ့ရေး DK70118, DK26741 နှင့် P30DK56336 ကထောက်ခံခဲ့သည်; မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု Grant က DA023680 အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု, အရက်အလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုနှင့်အရက်ထောက်ပံ့ရေး AA016731 နှင့် AA015566; အာရုံကြောရောဂါများနှင့်လေဖြတ် Grant က IT32NS061847-01A2 အမျိုးသားအင်စတီကျု, အိုမင်းခြင်းဟာ Grant က AG028040 အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု, အမျိုးသားနှလုံး, အဆုတ်နှင့်သွေး Institute မှ Grant က HL088083; အဆိုပါ Ellison ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဖောင်ဒေးရှင်းမှ; နှင့်အရက်နှင့်စွဲလမ်းမှုသုတေသနများအတွက် Pearson ရေးစင်တာ။ ဤလုပ်ငန်းကိုတစ်ဦးသောအဘို့ကိုအရက်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက်အပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုနှင့်အမျိုးသားအင်စတီကျု၏ Intramural သုတေသန Programs ကိုကထောက်ခံခဲ့သည်။ ဤသည်အဆိုပါ Scripps Research Institute မှဆီကနေလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အရေအတွက်ကို 19807 ဖြစ်ပါတယ်။
ဤဆောင်းပါးသည်တစ်ဦး PNAS တိုက်ရိုက်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
1 ။ Volkow ND, ပညာရှိ RA ။ ဘယ်လိုမူးယစ်ဆေးစွဲကျွန်တော်တို့ကိုအဝလွန်ခြင်းကိုနားလည်ကူညီပေးနိုငျသနညျး နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 555-560 ။ [PubMed]
2 ။ Corwin RL ။ ကြွက် Bingeing: ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလွန်အကျွံအပြုအမူ၏တစ်ဦးကမော်ဒယ်? အစာစားချင်စိတ်။ 2006; 46: 11-15 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3 ။ et al Boggiano MM ။ နှင့်မူးရူး-အစာစားခြင်းမရှိဘဲအဝလွန်မူးရူး-စားနှင့်အဝလွန်ခြင်း vs ပိန်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်: အရေးပါတယ်လို့အစားအစာ၏အမြင့်စားသုံးမှုမူးရူး-စားသုံးခြင်းအဝလွန်ခြင်းမှလွယ်ကူစွာထိခိုက်၏လွတ်လပ်သောခန့်မှန်းထားပါတယ်။ int J ကိုအဝလွန်ခြင်း။ 2007; 31: 1357-1367 ။ [PubMed]
4 ။ Avena မိုင်, Rada P ကို, Hoebel BG ။ သကြားစွဲလမ်းများအတွက်သက်သေအထောက်အထား: ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, အလွန်အကျွံသကြားစားသုံးမှု၏အပြုအမူနှင့် neurochemical ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2007; 32: 20-39 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
5 ။ Teegarden SL, ဘေးလ် TL ။ အစားအသောက် relapse အဘို့အစိတ်ပိုင်းများနှင့်စွန့်စားမှုတိုးလာအစားအသောက် preference ကိုအသီးအနှံအတွက်လျော့နည်းစေပါသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 61: 1021-1029 ။ [PubMed]
6 ။ ဝါဂွမ်း P ကို, Sabino V ကို, Steardo L ကို, Zorrilla EP ။ အလွန်အမင်းနှစ်သက်အစားအစာမှကန့်သတ် access ကိုအတူကြွက်များတွင် Opioid-မှီခို anticipatory အနုတ်လက္ခဏာ contrast နဲ့မူးရူးကဲ့သို့စား။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 524-535 ။ [PubMed]
7 ။ Koob gf ။ စွဲလမ်းအတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များကိုတစ်အခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 59: 11-34 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
8 ။ Koob gf, Le Moal အမ်မူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးမှု: Hedonic homeostatic dysregulation ။ သိပ္ပံ။ 1997; 278: 52-58 ။ [PubMed]
9 ။ CRF1 receptors ၏အခန်းကဏ္ဍ: Ghitza UE, Grey က SM, Epstein DH, ဆန် KC, Shaham Y. အဆိုပါ anxiogenic မူးယစ်ဆေး yohimbine တစ်ဦးကြွက် relapse မော်ဒယ်အတွက်ရှာကြံအရေးပါတယ်လို့အစားအစာ reinstates ။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31: 2188-2196 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
10 ။ ဝါဂွမ်း P ကို, Sabino V ကို, Steardo L ကို, Zorrilla EP ။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပိုမိုနှစ်သက်အစားအစာ access ကိုကြွက်များတွင် Chow ၏အားဖြည့်ထိရောက်မှုလျော့နည်းစေသည်။ နံနက် J ကို Physiol ။ 2008; 295: R1066-1076 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
11 ။ ဝါဂွမ်း P ကို, Sabino V ကို, Steardo L ကို, Zorrilla EP ။ သူတွေရဲ့စားသောက်ပိုမိုနှစ်သက်သည်အစားအစာမှဝင်ရောက်ခွင့်ပြောင်းနှင့်အတူအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်စိုးရိမ်စိတ်-related နှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်။ Psychoneuroendocrinology ။ 2008; 34: 38-49 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
12 ။ Berners LA က, Avena မိုင်, Hoebel BG ။ Bingeing, Self-ကန့်သတ်ခြင်း, မွှေးအဆီဓာတ်စာကန့်သတ် access ကိုအတူကြွက်များတွင်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အဝလွန်ခြင်း။ 2008; 16: 1998-2002 ။ [PubMed]
13 ။ Zorrilla EP, Koob gf ။ စိုးရိမ်စိတ်အဘို့အ CRF1 ရန်များ၏ကုထုံးအလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူ Opin စုံစမ်းစစ်ဆေးမူးယစ်ဆေးဝါး။ 2004; 13: 799-828 ။ [PubMed]
14 ။ Carobrez AP, Bertoglio LJ ။ စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ၏ Ethological နှင့်ယာယီဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း: အဆိုပါမြင့်မားသောပေါင်း-ဝင်္မော်ဒယ် 20 နှစ်ပေါင်းပေါ်မှာ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2005; 29: 1193-1205 ။ [PubMed]
15 ။ Markou တစ်ဦးက, et al ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ။ Psychopharmacology ။ 1993; 112: 163-182 ။ [PubMed]
16 ။ ဂျော့ခ်ျအို et al ။ CRF-CRF1 system ကို activation နီကိုတင်း-မှီခိုကြွက်များတွင်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်တိုး mediates ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2007; 104: 17198-17203 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17 ။ အပြင်, ဖတ်ကဘ, Laugharne JD, Ahluwalia NS ။ တစ်ဦးအနိမ့်အဆီအစားအသောက်များတွင်ပြောင်းလဲနေတဲ့ပြီးနောက်ခံစားချက်အတွက် ALTER ။ br J ကို Nutr ။ 1998; 79: 23-30 ။ [PubMed]
18 ။ Cruz MT, et al ။ CRF1 အဲဒီ receptor ရန်စသည်တို့အတွက်ဗဟို amygdala နှင့် Vivo အတွက်ဂါဘမြို့သား၏အီသနော-သွေးဆောင်လွှတ်ပေးရန်ပိတ်ဆို့။ အရက် Clin Exp Res ။ 2008; 32: 6s1 P27A ။
19 ။ Koob gf, Bloom FE ။ မူးယစ်ဆေးမှီခို၏ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ သိပ္ပံ။ 1988; 242: 715-723 ။ [PubMed]
20 ။ Flaherty CF, Grigson ဆာ။ anticipatory မတူဘဲတုံ့ပြန်မှုအရေးပေါ်၏အခန်းက္ပ: အားဖြည့်ဖို့ဆနျ့ကငျြဘ မှစ. ။ J ကို Exp Psychol ။ 1988; 14: 165-176 ။ [PubMed]
21 ။ ချန်ကို C, et al ။ 2,5-dimethyl-3- (6-dimethyl-4-methylpyridin-3-yl) -7-dipropylaminopyrazolo [1, 5-တစ်ဦး] pyrimidine (NBI 30775 / R121919) ၏ဒီဇိုင်းနှင့်အစွမ်းထက်၏စီးရီး၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာ-လှုပ်ရှားမှုဆက်ဆံရေးနှင့် နှုတ်တက်ကြွ corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor ရန်။ J ကို Med Chem ။ 2004; 47: 4787-4798 ။ [PubMed]
22 ။ Cooper က SJ, Francis က RL ။ ကြွက်များတွင်နှစ်ခုအစားအစာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို အသုံးပြု. parameters တွေကိုအစာကျွေးအပေါ် chlordiazepoxide ၏စူးရှသောသို့မဟုတ်နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုးကျိုးများ။ J ကို Pharm Pharmacol ။ 1979; 31: 743-746 ။ [PubMed]
23 ။ Laboure H ကို, Saux S က, ဇီဝဖြစ်စဉ် parameters တွေကိုအပေါ်အစားအသောက် texture ပြောင်းလဲမှု Nicolaidis အက်စ်အကျိုးသက်ရောက်မှု: ရေတိုနှင့်ရေရှည်နို့တိုက်ကျွေးရေးပုံစံများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်။ နံနက် J ကို Physiol ။ 2001; 280: R780-R789 ။ [PubMed]
24 ။ ဝါဂွမ်း P ကို, Sabino V ကို, Steardo L ကို, Zorrilla EP ။ အပြည်ပြည်သွား 7142 အထူးသမုန့်ညက်အရွယ်အစားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုက်ကျွေးနှုန်းနှင့်ပုံမှန်လျော့ကျစေပါတယ်: benzodiazepine ပြောင်းပြန် agonists အစားအစာအာခေါင်ကိုလျော့ချကြောင်းအထောက်အထား။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 32: 1069-1081 ။ [PubMed]
25 ။ Lahmame တစ်ဦးက, Grigoriadis DE, De Souza eb, Armario အေဦးနှောက် corticotropin-releasing အချက် immunoreactivity ငါး inbred ကြွက်ဗီဇအတွက် receptors: အတင်းအကျပ်ရေကူးအပြုအမူမှဆက်ဆံရေး။ ဦးနှောက် Res ။ 1997; 750: 285-292 ။ [PubMed]
26 ။ Zorrilla EP, Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, မှီခိုကြွက်များတွင်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာစဉ်ကာလအတွင်းဒေသဆိုင်ရာ CRF ကဲ့သို့-immunoreactivity နှင့် plasma corticosterone ၏အဆင့်ဆင့်အတွက် Weiss အက်ဖ်အပြောင်းအလဲများ။ Psychopharmacology ။ 2001; 158: 374-381 ။ [PubMed]
27 ။ ရောဘတ်က M, Madamba စင်ကာပူဒေါ်လာ, Moore က SD, Tallent MK, Siggins ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ အီသနောကြွက်အလယ်ပိုင်း amygdala အာရုံခံအတွက်အကျူးများနှင့် postsynaptic က်ဘ်ဆိုက်များနှစ်ဦးစလုံးမှာ GABAergic ဂီယာတိုးပွားစေပါသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2003; 100: 2053-2058 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
28 ။ ရောဘတ်က M, Madamba စင်ကာပူဒေါ်လာ, Stouffer DG, Parsons LH, Siggins ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ အီသနော-မှီခိုကြွက်များ၏အလယ်ပိုင်း amygdala အတွက်တိုးမြှင့်ဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရန်။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 10159-10166 ။ [PubMed]